The Walking Dead: Android အတွက် Frontier အသစ် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆိုပါ Walking Dead: တစ်ဦးက New Frontier
အဆိုပါ Walking Dead: တစ်ဦးက New Frontier APK ကို
* သာလျှင် * OS6 Marshmallow running devices များနှင့် OpenGL5ကိုထောက်ပံ့သော OS3.1 Lollipop ဗားရှင်းကိုအထောက်အပံ့
ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း 1 ဆုရစတူဒီယို, တွေ့ခဲ့ရဘူးအားကစားပြိုင်ပွဲကနေဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကရာသီအတွက်ပါဝင်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဖုတ်ကောင်လက်ဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာဝမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အိတ်ကပ်မငြိမ်သက်မှုများကနေပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကုန်ကျစရိတ်မှာ? အသက်ရှင်သောအသစ်နယ်စပ်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်သလား?
ဗီယာ, သူ့ထံမှယူမိသားစုကိုရှာဖွေစိတ်ပိုင်းဖြတ်လူငယ်တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့သင့်ကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်မသိမမြင်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ သူမ၏အမည်အား Clementine ဖြစ်ပါသည်, နှင့်သင့်ကံကြမ္မာသင်လုပ်တိုင်းရွေးချယ်မှုသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဘယ်မှာဇာတ်လမ်းအတွက်အတူတကွချည်နှောင်လျက်ရှိပါသည်။
*** ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 20% အဆိုပါ Walking Dead အတွက်အပိုဆောင်းဖြစ်စဉ်များအပေါ်: တစ်ဦးက New Frontier ကို 'ဇာတ်လမ်းတွဲများ' 'Menu ထဲမှာ In-app ကိုမှတဆင့် Multi-Pack ကို [ဇာတ်လမ်းတွဲများ 2-5 ဆော့ဝဲအစုအဝေး] ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ***
- Adreno 418, 420, 430 နှင့် 530
- Nvidia က Shield ကို Tablet ကို
- ဂူဂဲလ် Pixel, Pixel ကို C & Pixel XL
- Samsung ရဲ့ Galaxy S7 & S7 Edge (သာ Adreno)
- Sony Xperia X ကို, XZ, Z4, & Z5
- ကို HTC One (M9) & 10
မထောက်ပံ့ devices များဥပမာ:
- အောက်တွင် Samsung ရဲ့ Galaxy S6 / S6 Edge နှင့်
- အောက်တွင် Google Nexus5နှင့်
- ကို HTC One (M8) နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
အဆိုပါ Walking Dead: တစ်ဦးက New Frontier
820.37 ကို MB